ပြောပါ မေမေ…သားကို အရှက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား လွမ်းရေးကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား – Shwe Naung
Shwe Thuta | November 22, 2020 | Knowledge | No Comments
အမိမဲ့သား ရေနဲ ငါး သွေးမပျ က်ပါ အမေ ပေးရက်တာ အမေ့ဆန္ဒ သံသယ ဆိုတာမထား ပါရစေနဲ့တော့ သားဟာ အမေ့သားပါ အဖေထားခဲ့တာ အမေပါ အမေ ထားရက်တာ သားပါ အမေသားကို..
အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? လွမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? ဝမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလားနားလည်ပါရစေ အမေ နို့ဘူးထဲက နို့ချိုရည် အမေ့နို့ မဟုတ်မှန်းသားသိတယ်…နူးညံ့စွာထွေးထားတဲ့လက် အမေ့လက် မဟုတ်မှန်း သားသိတယ် အသက်တစ်ချောင်းနဲ့လူသား တန်ဘိုးထားပုံခြင်းများ မှားနေသလားအမေ…ရယ်
ရင်နဲ့လွယ်ထားရတဲ့ ကာလ မွေးဖွားရတဲ့ ဒုက္ခ အမေ့ကို သနားတယ် ပစ်ပါအမေ.. စွန့်ပါအမေ.. အမေ့ကို သားဗွေမယူပါဘူးအမေထက်သာတဲ့ ဂရုဏာရှင်တို့လက် အမေအပ်ခဲ့တာဘဲလေ… အမေတာဝန်ကျေပါတယ်…အသေားခံယူချင်တာ… အမေ့ဆီက မေတ္တာပါ သားခံယူချင်တာ… အမေ့ဆီက ဂရုဏာပါ..အမေ
ဪ… သားဘဝမှာ မွေးကျေးဇူးကို မမေ့သလို ကျွေးကျေးဇူးတွေ ဆပ်ရပါဦးမယ် ပုခက်တွင်းက နှလုံးသား ရေနဲငါး ဖြစ်ပါစေ… လူးလွန့်ရင်း အသက်ရှင် ရင်ခွင်မဲ့တွေကြားမှာ အားဖြစ် သမိုင်းတခေတ်မှာ…အမေ့သား..ဟာ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးတော့ အမေသိစေချင်ပါသေးတယ်ဗျာ…
အမိမဲ့သား ေရနဲ ငါး ေသြးမပ် က္ပါ အေမ ေပးရက္တာ အေမ့ဆႏၵ သံသယ ဆိုတာမထား ပါရေစနဲ႕ေတာ့ သားဟာ အေမ့သားပါ အေဖထားခဲ့တာ အေမပါ အေမ ထားရက္တာ သားပါ အေမသားကို..
အရွက္ေၾကာင့္ ပစ္ခဲ့တာလား? အသက္ေၾကာင့္ ပစ္ခဲ့တာလား? လြမ္းေရးေၾကာင့္ ပစ္ခဲ့တာလား? ဝမ္းေရးေၾကာင့္ ပစ္ခဲ့တာလားနားလည္ပါရေစ အေမ နို႔ဘူးထဲက နို႔ခ်ိဳရည္ အေမ့နို႔ မဟုတ္မွန္းသားသိတယ္…ႏူးညံ့စြာေထြးထားတဲ့လက္ အေမ့လက္ မဟုတ္မွန္း သားသိတယ္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕လူသား တန္ဘိုးထားပုံျခင္းမ်ား မွားေနသလားအေမ…ရယ္
ရင္နဲ႕လြယ္ထားရတဲ့ ကာလ ေမြးဖြားရတဲ့ ဒုကၡ အေမ့ကို သနားတယ္ ပစ္ပါအေမ.. စြန႔္ပါအေမ.. အေမ့ကို သားေဗြမယူပါဘူးအေမထက္သာတဲ့ ဂ႐ုဏာရွင္တို႔လက္ အေမအပ္ခဲ့တာဘဲေလ… အေမတာဝန္ေက်ပါတယ္…အေသားခံယူခ်င္တာ… အေမ့ဆီက ေမတၱာပါ သားခံယူခ်င္တာ… အေမ့ဆီက ဂ႐ုဏာပါ..အေမ
ဪ… သားဘဝမွာ ေမြးေက်းဇူးကို မေမ့သလို ေကြၽးေက်းဇူးေတြ ဆပ္ရပါဦးမယ္ ပုခက္တြင္းက ႏွလုံးသား ေရနဲငါး ျဖစ္ပါေစ… လူးလြန႔္ရင္း အသက္ရွင္ ရင္ခြင္မဲ့ေတြၾကားမွာ အားျဖစ္ သမိုင္းတေခတ္မွာ…အေမ့သား..ဟာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေလးေတာ့ အေမသိေစခ်င္ပါေသးတယ္ဗ်ာ…
ပထမဦးဆုံးသော လကမ္ဘာပေါ်သို့ သွားရောက်ပြီးလေ့လာခွင့်ရနိုင်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်တစ်ဦး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ